जमराको फाइदा ! - DibyaJyotish (दिव्य ज्योतिष)
Home / दिव्य निरोग / जमराको फाइदा !
जमराको फाइदा !
गहुँका जमरा जौका जमारामा जस्तो नभएपनि यसमा पनि भिटामिन, खनिज, एमिनोएसिड आदी पाइन्छ । यसले विभिन्न किसिमकको भिटामिन, प्रदान गर्छ । जमराले कलेजमा भएको विशाक्त पदार्थलाई हटाउँन र ठूलो आन्द्रा सफा गरी शरीरमा स्फुर्ति बढाउँन, पाचन शक्ति मजवुत् बनाउँन, रगत सफा राख्न मद्दत गर्छ । क्यान्सरको उपचार लगायत विभिन्न किसिमका भिटामिन, इन्जाइम, खनिजलगायत महत्वपूर्ण तत्व हुन्छ । रोग प्रतिरोध क्षमता बृद्धि गर्ने गुण र मासुभन्दा बढी प्रोटिन एवं शरीरमा चोटपटक लाग्दा छिटो निको गराउँने हुनाले मधुमेहीलाई फाइदा गर्छ ।